မြို့ပတ်ရထား Connectors - ဆက်စပ်ပစ္စည်း - အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများဖြန့်ဖြူး | Infinite-Electronic.hk
နေအိမ်ထုတ်ကုန်များconnectors, Interconnectionမြို့ပတ်ရထား Connectors - ဆက်စပ်ပစ္စည်း
213812-1 Agastat Relays / TE Connectivity ဖေါ်ပြချက်:CONN RING COUPLING CPC SIZE 23
CIRP2214GSS Agastat Relays / TE Connectivity ဖေါ်ပြချက်:CONN GROMMET WIRE SEAL GRAY SKT
SEB-C Agastat Relays / TE Connectivity ဖေါ်ပြချက်:BUSHING SIDE ENTRY 3"
208680-2 Agastat Relays / TE Connectivity ဖေါ်ပြချက်:CONN CAP SEAL SIZE23 METAL CHAIN
- တဦးတည်းကုမ္ပဏီအတွင်းအောင်မြင်သော Amphenol Tuchel & Sine ထုတ်ကုန်များ၏စုစည်းမြောက်အမေရိကဈေး၌အာရုံစူးစိုက်ဘယ်တော့မှမပြုမီနဲ့တူဝယ်လိုအားကျေနပ်အောင်လုပ်ဖို့တိုးချဲ့...အသေးစိတ်
AX-MARK4 Amphenol Tuchel Electronics ဖေါ်ပြချက်:CONN MARKING SLEEVE YELLOW
MA4FSR-A12.8 Amphenol Tuchel Electronics ဖေါ်ပြချက်:BOOT STRAIN RELIEF 12.8MM DIAM
A114018 Amphenol Tuchel Electronics ဖေါ်ပြချက်:BLANK SEAL PLUG SIZE 8 8-10 AWG
RTFD12B Amphenol Tuchel Electronics ဖေါ်ပြချက်:GASKET PANEL SHELL SIZE 12
- Amphenol LTW နည်းပညာ (ALTW) IP65 ထံမှ IP69K အထိ I / O ထုတ်ကုန်များ၏အကြီးဆုံးခင်းကျင်းနှင့်အတူကြမ်းတမ်းခြင်းနှင့်ကြမ်းတမ်းပတ်ဝန်းကျင် Interconnection အတွက်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပါ...အသေးစိတ်
SC-L-UL13-03-BL Amphenol LTW ဖေါ်ပြချက်:CABLE JOINER 3POS 4.5-6.5MM
SC-L-UL11-03-YW Amphenol LTW ဖေါ်ပြချက်:CABLE JOINER 3POS 6.5-8.5MM
SC-L-UL11-04-YW Amphenol LTW ဖေါ်ပြချက်:CABLE JOINER 4POS 6.5-8.5MM
SC-L-ULT2-03-GN Amphenol LTW ဖေါ်ပြချက်:CABLE JOINER 3POS 8.5-10.5MM
- Bulgin Components ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းအရည်အသွေးကိုရေစိုခံ connectors ၏, ထိုခဲ့ကြတယ် IP68 rated ရေစိုခံမြို့ပတ်ရထား connector ကိုလိုင်းပင်မ connectors, ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်သူ, EMI filter မ...အသေးစိတ်
PXP6088 Arcolectric (Bulgin) ဖေါ်ပြချက်:CABLE GLAND PACK 4-10MM
PXP4089/YL Arcolectric (Bulgin) ဖေါ်ပြချက်:4000 COLOUR CODING ACCESSORY PAC
12855 Arcolectric (Bulgin) ဖေါ်ပြချက်:PVC INSULATION BOOT
12023 Arcolectric (Bulgin) ဖေါ်ပြချက်:SEALING GLAND BLACK
- LEMO တိကျစွာထုံးစံကွန်နက်ရှင်ဖြေရှင်းချက်၏ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ LEMO အရည်အသွေးမြင့်တွန်းအားပေး-ဆွဲ connectors စိန်...အသေးစိတ်
GMA.1B.045.DG LEMO ဖေါ်ပြချက်:BEND RELIEF 4.5MM GRAY
BFG.00.100.PCSG LEMO ဖေါ်ပြချက်:CONN CAP FOR .00. PLUG IP51
BRF.3K.200.NAS LEMO ဖေါ်ပြချက်:CONN CAP FOR 3K-3E RCPT IP68
GMA.1B.054.DR LEMO ဖေါ်ပြချက်:BEND RELIEF 5.4MM RED
RM15TP-C(71) Hirose ဖေါ်ပြချက်:CONN CAP PLUG SIZE 15 MTL CHAIN
HR10A-13R-C Hirose ဖေါ်ပြချက်:CONN DUST CAP FOR 20POS RECEPT
HS25RC(72) Hirose ဖေါ်ပြချက်:CONN CAP SIZE 25 METAL CHAIN
ထုတ်လုပ်သူ: Arcolectric (Bulgin)
ဖေါ်ပြချက်: CABLE GLAND PACK 4-10MM
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 44454 pcs
ဖေါ်ပြချက်: GASKET MINI-CON-X
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 270935 pcs
ဖေါ်ပြချက်: BEND RELIEF 4.0MM GRAY
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 18838 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CONN RING COUPLING CPC SIZE 23
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 29570 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CONN GROMMET WIRE SEAL GRAY SKT
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 5515 pcs
ဖေါ်ပြချက်: M12 HOUSING FEMALE, M14X1, 9MM H
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 12048 pcs
ထုတ်လုပ်သူ: Amphenol LTW
ဖေါ်ပြချက်: CABLE JOINER 3POS 4.5-6.5MM
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 9965 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CONN CAP PLUG SIZE 15 MTL CHAIN
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 5186 pcs
ဖေါ်ပြချက်: BUSHING SIDE ENTRY 3"
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 9234 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CABLE JOINER 3POS 6.5-8.5MM
ဖေါ်ပြချက်: 4000 COLOUR CODING ACCESSORY PAC
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 26136 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CONN CAP SEAL SIZE23 METAL CHAIN
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 5889 pcs
ဖေါ်ပြချက်: PVC INSULATION BOOT
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 27443 pcs
ထုတ်လုပ်သူ: Amphenol Pcd
ဖေါ်ပြချက်: CRADLE W/TAPE WHITE SIZE 10
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 5931 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CONN GROMMET WIRE SEAL GRAY PIN
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 5103 pcs
ဖေါ်ပြချက်: BEND RELIEF 4.5MM GRAY
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 15455 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CABLE JOINER 4POS 6.5-8.5MM
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 8445 pcs
ထုတ်လုပ်သူ: Amphenol Tuchel Electronics
ဖေါ်ပြချက်: CONN MARKING SLEEVE YELLOW
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 119600 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CONN PLUG SEALING CAP SIZE 10
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 8075 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CONN FLANGE PANEL MOUNT SIZE 13
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 14338 pcs
ဖေါ်ပြချက်: BOOT STRAIN RELIEF 12.8MM DIAM
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 21756 pcs
ဖေါ်ပြချက်: RCPT COVER SHELL SIZE 20 CADMIUM
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 11000 pcs
ထုတ်လုပ်သူ: EasyBraid Co.
ဖေါ်ပြချက်: CONDUCTIVE CONN COVER 22R
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 79517 pcs
ဖေါ်ပြချက်: SEALING GLAND BLACK
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 215795 pcs
ဖေါ်ပြချက်: SEALING PLUG FOR XRC CONN
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 215111 pcs
ဖေါ်ပြချက်: TERMINATOR SOLDERSHIELD MED CBL
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 3100 pcs
ဖေါ်ပြချက်: BLANK SEAL PLUG SIZE 8 8-10 AWG
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 407375 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CABLE JOINER 3POS 8.5-10.5MM
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 6641 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CABLE JOINER 2POS 4.5-6.5MM
ဖေါ်ပြချက်: CONN CAP FOR C90 RCPT SIZE 10SL
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 14515 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CONN RCPT SEALING CAP SIZE 8
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 17928 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CONN DUST CAP FOR 20POS RECEPT
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 26891 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CONN WIRE ENTRY SEAL KIT SZ17-14
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 11772 pcs
ဖေါ်ပြချက်: GASKET PANEL SHELL SIZE 12
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 165467 pcs
ဖေါ်ပြချက်: M35 LOCKING CLIP
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 15800 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CONN CAP DUST SHELL SIZE 11
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 42243 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CONN CAP SIZE 25 METAL CHAIN
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 12430 pcs
ဖေါ်ပြချက်: MC THREADED ADAPTER SS B-SIZE
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 5885 pcs
ဖေါ်ပြချက်: M5 MALE DUST CAP METAL
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 21334 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CONN CAP FOR .00. PLUG IP51
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 6384 pcs
ဖေါ်ပြချက်: CONN CAP FOR 3K-3E RCPT IP68
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 2689 pcs
ဖေါ်ပြချက်: BEND RELIEF 5.4MM RED
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 18191 pcs
ဖေါ်ပြချက်: SEALING CAP ASSY,SZ 23,CPC
ကုန်ပစ္စည်းလက်ဝယ်ရှိ: 7764 pcs